Useke wacabanga nokuzibulala umfundisi osolwa ngawocansi – Umbiko. | isiZulu
Useke wacabanga nokuzibulala umfundisi osolwa ngawocansi – Umbiko.
Ukhala ngempatho engeyinhle ejele umfundisi osolwa ngawocansi
Johannesburg – Umfundisi osolwa ngamacala ahlobene nokunukubeza ngokocansi kanye nokushushumbisa abantu, uvele eNkantolo yeMantshi yasePort Elizabeth kuqhubeka isicelo sebheyili ngoLwesihlanu.
Lo mfundisi odabuka eNigeria, oneminyaka engu-58 ubudala, kuthiwa usebhalele uNgqongqoshe wezangaPhandle ezweni lakhe, uKhadija Bukar Abba Ibrahim‚ ekhalaza ngokuboshwa kwakhe nangendawo agcinwe kuyo, kubika iHeraldLIVE.
Uphinde wakhala nangokuthi waboshiswa okomshokobezi kanti futhi ulala phansi ejele akukho “nesipontshi lesi” kanti indawo agcinwe kuyo inamakhaza ashubisa umnkantsha.
OLUNYE UDABA: Ukhala ngempatho engeyinhle ejele umfundisi osolwa ngawocansi
Lo mfundisi ohola ibandla elinamagatsha amaningi kulona lonke leli, usolwa ngokuqoqa izingane zamantombazane kula mabandla ukuba ziyohlala emzini wakhe oseMhlanga, lapho kusolakala ukuthi ufike azinukubeze khona ngokocansi.
Kuqhubeka isicelo sebheyili enkantolo ngoLwesihlanu, lo mfundisi – ekhuluma ngezwi likammeli wakhe u-Alfonso Hattingh - uthe ikhasimende lakhe linemicabango yokuzibulala kusukela lakhalelwa ngamasongo kaSigonyela esikhumulweni sezindiza ngenyanga eyedlule.
Lo mfundisi zamkhalelea ngemuva kohlelo lukamabonakude iSpecial Assignment lapho okwavela khona abesifazane ababemsola ngokubanukubeza ngokocansi.
Le nceku ikhala ngokuthi ukuboshwa kwayo kwabe kuphambene nomthetho.
Ivele enkantolo namhlanje kuphinde kwabekwa obala izinsolo ezithi kunabesifazane abakhulile basebandleni layo okuyibo ababeqoka amantombazane azoya kohlala emzini kamfundisi.
Kuthiwa lo mfundisi wayeqinisekisa ukuthi ukhetha amantombazane aqhamuka emakhaya anganebo obaba, kusho umphenyi woKlebe uPeter Plaatjies enkantolo.